जनावरको जुनीबाट मान्छे बनाएपछि बिहेकालागि पक्का » नेपाल प्लस
जनावरको जुनीबाट मान्छे बनाएपछि बिहेकालागि पक्का
-रुपेन्द्र कर्माचार्य / चितवन
उपरदाङगढि क्षेत्र । चितवन भएपनि धेरैलाई यो चितवनमा पर्छ भन्ने हेक्का हुँदैन। चितवन समथर र विकसित ठाउँमा पर्छ भन्ने सोच्छन् धेरैले । तर यो उपरदाङ गढि कुनै पहाडी जिल्ला जस्तो लाग्छ । यहि क्षेत्र घुम्न जाँदा एकदिन अनौठो द्रिष्य देखे आँखाले । सयौं मानिसहरु वरिपरि छन् । एउटा वालक वरिपरि केहि मान्छे झुम्मिएका छन् । अनि उसलाई उता गाईको गोठमा लगेर दाम्लोले बाँधिएको छ ।
कुनै ठुलै अपराधीलाई सजाएँ दिन लागे झैं । मुखमा दुबो र तितेपाती कोचिएको छ । के होला यस्तो ? आखिर यो त मगर केटोको ब्रतबन्ध पो रहेछ ।
मगर जातिको क्षेवर (ब्रतबन्ध भन्न सकिन्छ) गर्दा मामाले भान्जाको कपाल काटिदिने, नयाँ लुगा लगाईदिने जस्ता विधिहरु सम्पन्न गरिसकेपछि केटो मानिसको जुनीमा बदलिन्छ । अनि बल्ल बिवाहकालागि योग्य हुन्छ भन्ने चलन रहेछ । त्यो भन्दा केटो जनवारको जुनीमा रहन्छ भनिँदो रहेछ र विवाहकालागि अयोग्य ठानिँदो रहेछ ।
डाँडाकाँडा भिर पाखा उसै त रमाइलो । झन् त्यसमाथि मादलको तालमा दोहोरी भाखामा छमछम नाच्दा त सुनमा सुगन्ध थपिए झैं लाग्छ ।
नाच्न र गाउन खेत, बारी, आँगन, चौर कुनै ठाउँ बाँकि रहेन । बच्चादेखि बुढासम्म सबै खप्सिस । कोहीभन्दा कोही कम थिएन नाच्न र गाउन । गणेश बहादुर मगरको छोराको छ्वरमा उपरदाङगढी पुग्दा हामीलाई पनि यस्तै अनुभव भयो ।
ओहो मगरको छ्वर त साच्चै भब्य हुँदोरहेछ । कुनै विवाह समारोह भन्दा कम थिएन। पाहुना सत्कारकोलागि घर दुलही झैं सिंगारिदैपनि थियो ।
आगाको लप्कामा सहभागिहरुलाई मासु भात पकाउनेको आफ्नै संसार थियो ।
भोजकोलागि काउलेबाट ल्याएको सिंगो राँगो नै ढल्यो । राँगो नचल्नेहरुकोलागि खसीको पनि व्यवस्था हुदैथियो ।
गुरुङ मगर समूदायले गर्ने छ्वरको तयारी त हप्तौं अगाडिदेखि पो हुने रहेछ । जाँड र रक्सी का घ्याम्पा त पहिले देखि कति हो कति तयार पार्ने रहेछन् ।
छेवर सम्पन्न भैसकेपछि मामाले भाञ्जालाई बोकी घर पुर्‍याउनुपर्छ । “हामीले भाञ्जो लिएर आयौं है । लिने हो कि होईन ?” मामाले सोध्छन् । बाबुआमाले स्विकृति दिए पछि बल्ल दुलाहा घर भित्र प्रवेश गर्छ ।
तर, त्यती सजिलै कहाँ जान पाउँछन् र ?बाटो छेकिनेगरि राखिएको सेलरोटी, तरकारी र जाँडरक्सीको उचित मुल्य तिरे पछि मात्र बाटो खुल्छ । आफन्त र पाहुनाहरु सबैले दुलाहा र कन्याहरुलाई टिका लगाइदिएर भेटी चढाउँछन् ।
सोलीभरी सेलरोटी, जाँडरक्सी जस्ता कोशेली बोकेर आउने रहेछन् पाहुना र चेलीबेटीहरु । कुखुरा, खसी, बोका पनि कोशेलीको रुपमा भित्रिए । चलन अनुसार यस्ता कोशेलीहरुको मुल्याङ्कन गरि त्यसको दोब्बर नगद वा जिन्सीको रुपमा चेलीबेटीहरुलाई दिनुपर्नेरहेछ । “चेलीबेटीहरु सबैलाई बराबर दिन्छौं ।” दुलाहाको काका श्यामले भने । कसैले कम पाएको महशुस भएमा पछि उनीहरुलाई अर्को पटक आउँदा थप गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसपछि भोज शुरु भयो । दुलाहाले खान शुरु गरेपछि मात्र अरुले खान पाउने रहेछन् । मासुभात मात्र हो र ? खानासँगै जाँडरक्सी पनि पस्कियो । छ्वरमा त जाँडरक्सीको खोलो नै बग्ने रहेछ । बेलुकी म पनि भोजमा सामिल भएँ । सिलावरको ठूलो बड्को भरि रक्सी अगाडि तेर्सियो। यत्रो बड्कोमा त जाँड मात्र पिउँछन् भन्ठानेको त ……. । “गिलासमा दिन मिल्दैन ?” मैले सोधें । “हाम्रो त चलन नै यस्तै हो ।” गणेशले भन्नुभयो । मलाई त रुउँ कि हाँसौं जस्तो भयो । हाम्रो नेवारी चलन अनुसार त अझ प्यालामा पिउने गरिन्छ ।
आँगनमा दोहोरी चलिरहेको थियो । रक्सीको रन्कोमा दशपन्ध्र फन्को नाचेँ । नाचगान त रातभरि नै चल्यो । लोकभाखा पनि कति कति । एकजना युवा कलाकारले सुरीलो भाखामा गित गाए ।
“भिरैमा चढ्यो मालिगाई
रुवाउँदै रुवाउँदै किन छुटायो दैवले
चोखो माया लाउनेहरुलाई”
-रुपेन्द्रका अघिल्ला ब्लगपनि हेर्नुस-
सुगम जिल्लाको दूर्गम वस्तीमा झोला, चप्पलले ल्याएको परिवर्तन
मान्छेलाई खान्की छैन गिद्दलाई रेष्टुरेस्ट
के छैन प्राक्रितिक र सांस्क्रितिक महत्वको उपरदाङगढिमा ?
हात्तीपोलो: जति फुच्चे उति तगडा
गाउँ हेर्दै परदेशी संझिँदा रोएको मन
भर्खरै उड्लान जस्ता सञ्जु शाहीका चरा कला
प्रकाशित मिति: January 6, 2010
नेपालीसितै रमाएर मनाए ईटालियनलेपनि मिलानमा दशैं
स्वास्थ्य शिविर खडा गर्दै डा समीर बाढिग्रस्त क्षेत्रमा, एकै दिन ३५० को स्वास्थ्य जाँच र राहत बितरण
पूर्वी क्षेत्रमा बाढीको असर (बाढीग्रस्त क्षेत्रमै पुगेर खिचेका तस्विरहरुको कथा)
इटालीको मिलान शहरबाट नयाँ अभियान : नेपाली भाषाका पाठशाला विश्वभरि बनाईने
जनसंपर्क समिति स्विजरल्याण्डलेआयोजना गरेको भलिवल प्रतियोगितामा बासेल टिम प्रथम
हुन त हामी नेपाली धेरै जनजाती र अ-आफ्नै बिबिध चलन सस्क्रितिको धनी मानिन्छ यो नै हाम्रो परिचय हो, तर यहाँ कुनै पुराना चलन अनी थोरै अन्ध विश्वाशलाई आजकायुबाबर्गले केही सुधार र परिमार्जन गर्दै लानु पर्ने देखिन्छ आजोको बैगानिक युग्मा आएर यो ढुग्गे युगलाई परिवर्तन गर्नु आव्स्यक पनि छ, जस्तो अनाओसेक खर्च खान-पान्मा स्वसच्छ्ता, यो जाडरक्सीको उचित प्रयोग। यो हाम्रो पुरानो सस्क्रितीलाई मर्न दिनु हुदैन भन्दै हामी ढुङे युगमै अल्मलिएर बसिरहेकाछौ, मान्छे चन्दमालाई पड्कएर पानी निकाली बस्ती बसाउने तयारिमा छन् हामी नेपाली चन्द्रमालाई पुजा गरिरहेका छन्। हो आफ्नो जात धरमा अनुसार को रितिरिवाज नछोद्नु राम्रो तर कोही अचाक्ली अन्धबिस्वास र फर्जुल खर्च अनी आफ्नै स्वास्थ्य्मा हानी नोक्सानी हुने कुराहरुलाई सुधार र परिमार्जन गर्दै लानु पर्ने आजका सिछित युबाहरुको कर्तब्य हो। मैले एउटा उदाहरण के देख्छु भने, हामी मगर जातिमा यो जडरक्सी अधिक प्रयोग गरेका। स्वास्थको हिसाबले पनि यो अती हानिकारक नै छ यो मन्द बिश हो भनेका छन् डा. हरुले। भने अब हामी सचेत नागरिकहरु चेतन्शिल बन्न आबसेक छ जसले देश बिकासमा थोरै भएपनी टेवा पुग्ने छ। अन्तमा लेखक जीलाई हार्दिक धन्यवाद फोतोसहितको लेख पस्किनु भएकोमा
यो त उही गाउपो रैछ है जहाँ एक्पटक झोला चप्पल बोकेर पुगेका थिए, समाज्सेबी रुपेन्द्र सरहरु ……………
thapa rajbarsingha / canada
PROUD TO BE NEPALESE…….VERY INTERESTING…..KEEP WRITING..
basu bidari chitwan national park
Thank you rupendra gi it isagreat job what you have explain about mager gatis.
SAMSER ALI MIYA DOHA QATAR
♪ ♥♪ निkh!l ♪♥ ♪: हमें आदत थी बहुत पीने की, पर उसने कसम देकर छुडा दी, मगर जब बैठे यारो की महफिल में, तो यारो ने उसकी कसम देकर पिला दी, ,
great article rupendra
देश बिगार्ने खुकार अपराधीहरु को फोटो सार्बजनिक भयो , http://www.outofdream.com/2010/01/nepali-gangster.html
palpali mgr-Tara Reply:
January 7th, 2010 at 12:08 pm
किन के कारणले तपाईंले खुङ्खार अपराधी भन्नु भएको, देश बिगार्ने त तिनै लोभी बाहुन बाजेहरुनै हुन भाग बन्डानपुगेर देश टुक्राउन खोज्दैछन जनजाती र सङ्घिएताको नारा फलाक्दै जनता एकापस्मा लडाउने र जनजाती मास्ने अनी सबै आफै बाहुनहरुले एक्लौटी खाने योजनाहो यो यहाँ हाम्रो अगाडी आफु आफु नमीले जस्तो गरदै पाच तारे होटेल तिर भोजगर्दै अङागालोमा बेरिदै हात मिलाउदै सपरिवारकासाथ युरोप भ्रमणमा रमाउदै ठिक्कछ भने पछि यो मानेमा खुन्खार अपराधी तिनै बुढो गोरुनेताहरु हुन गाई ओगत्न खोज्ने मात्रै गर्न केही हुती नभएका, लौ भन्नुस् न बहुनबाजेकै हातमा आज सममा देशको डाडुपन्युको हालिमुहाली छ अब अहीले देशको यो स्थिती हुनु मा को जिम्मेवार छ त .???????????????????????????/
ekdam chaakh laagdo
ram magar,nawalparasi now saudi
dherai ramro lagyo yo magarko prampragat saskriti lai bidesi bhumima dekhana pauda thanx rupendra
Very intresting our cultre, that is why nepal is reach of culture and tradition.
फोटोमा जिवजन्तु (२४ औं भाग)
पूर्व राजा सक्रिय बन्ने संकेत !
अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा पहिलो पटक नेपाल सम्बत कार्यक्रम
नबन्ला त लाप्राक नमूना वस्ति र एन आर एन ए भवन ?
सांसदको उमेदवार नपाएपछि बिज्ञापन
विचारको बिम्ब र त्यसको प्रतिबिम्ब
नेपाली सद्भाव बिथोल्ने र मनोनित भएर संस्था कब्जा गर्न खोज्ने जति एन आर एनको निर्वाचनबाट पराजित
अध्यक्षमा भट्टलाई चारवटै पार्टीको समर्थन, कोको छन् उनको प्यानमा ?
बाम एकताका सैद्धान्तिक आधारहरु
भारतसितको समझदारि अनुसारनै राजिनामा : द हिन्दुस्तान टाईम्स
ऐनामा हेरेर अनुहार मिलाउने कस्ता नक्कले चरा !
एन आर एन फ्रान्सको संस्थागत सञ्जाल ब्यक्ति र गूटका नाममा दुरुपयोग
एन आर एन ए फ्रान्सको नेत्रित्वकालागि महिला सहभागिता बढ्यो
बेलायतमा चन्दा, धन्दा र नदिनेलाई पारिने फन्दा !
माओवादी केन्द्रकी केन्द्रिय सदस्यले गरिन् किर्ते कागज, माओवादीकै कार्यकर्ताद्वारा कारवाहीको माग
भिन्चिको शहर (फोटो कथा)
अमेरिकामापनि राउटे जस्तो समूदाय !
झुक्काएर नेपाल पुर्‍याइएकि कविता बेल्जियम फिर्ता
नयाँ द्रिष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै एन आर एन ए ईटालीको अध्यक्षमा राजन चापागाईको उमेदवारी
Ashish Subba:के एनआरएनए नेपालका राजनैतिक दल
रविचन्द्र भट्टरार्इ:लाप्राक घलेकाेमात्र साख हाेइन
Kul magar:पुर्ण सत्य होइन सर । पछाडिको स
मोहन प्रसाद पौडेल:नेपालको प्रचलित कानून अनुसार य
रवि:सहि विश्लेषण ।
Prakash:मेरो पनि स्पेन बसाइ ११ बर्ष पा
राजेन्द्र भण्डारी:जर्मनीमा हुने भनिएको एन आर एन
Nepali:ये पुत्ले पत्रकार, जुनसुकै पा
Shiva lal Dhital:Excellent result for beautiful
narayan khadka:dr sab mero kammar dukher kam
महिना छान्नुहोस् October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015 July 2015 June 2015 May 2015 April 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 October 2014 September 2014 August 2014 July 2014 June 2014 May 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 May 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 July 2012 June 2012 May 2012 April 2012 March 2012 February 2012 January 2012 December 2011 November 2011 October 2011 September 2011 August 2011 July 2011 June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 November 2007 August 2007 April 2007 March 2007